Guddoomiyaha golaha KNEC oo sheegay inaysan jirin warqado imtixaan oo la helay – The Voice of Northeastern Kenya
Guddoomiyaha golaha KNEC oo sheegay inaysan jirin warqado imtixaan oo la helay
Anwar Mohamed September 30, 2018
Guddoomiyaha golaha imtixaanada qaran ee KNEC Prof. George Magoha ayaa sheegay inaysan jirin warqado ay ku qoranyihiin su’aalaha maadooyinka kala duwan ee lagu imtixaano ardayda oo la helay ama dibadda u baxay.
Waxaa uu hoosta ka xariiqay inay suuqa ku jiraan warqado been abuur ah oo sida uu hadalka u dhigay lagu khiyaanayo waalidiinta iyo ardayda u fariisanaya imtixaanada.
Ardayda isudiiwangeliyay inay sannadkan sameyaan imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da iyo midka fasalka sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ee KCPE-da ayuu ugu baaqay inay dadaalkooda sii laba jibaaraan.
Waxaa uu intaasi ku daray in si weyn loo sugayo ammaanka xarumaha lagu sameynayo imtixaanada sanadlaha ah si aynan u dhicin qish ama falalka waxisdabamarinada ah.
Hadalkan ayuu jeediyay xili uu ku sugnaa ismaamulka Kisii waxaa uuna intaasi ku daray in golaha KNEC uu helay xog ku saabsan inuu jiro qorsho lagu doonayo in warqadaha imtixaanada la geeyo goobo ka baxsan dugsiyada.
Prof. Magoha ayaa sheegay inay sido kale jiraan dad qorsheynaya inay isku ekeysiiyaan ardayda si ay ugu sameyaan maadooyinka qaar.
Waxaa uu wacad ku maray in tallaabo adag laga qaadayo cidii isku dayda inay imtixaan u sameyso arday isku diiwangeliyay.
Sido kale waxaa uu hoosta ka xariiqay in xarumaha ay ka dhacaan falalkaasi iyo kuwa kale ee aanan habboonayn laga soo qaadayo goob fal dambiyeed laga geystay oo kale.
Guddoomiyaha KNEC ayaa intaasi ku daray inay wada shaqeyn dhow kala dhexeyso wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga adeega macalimiinta ee TSC si loogu guuleysto maareynta imtixaanada qaran
← Tirada dadkii ku dhintay dhulgariir saameeyay Indonesia oo kor u dhaaftay 800 oo qof
Doorasho baarlamaani ah oo maanta ka dhaceysa Ciraaq →